China DX51D Galvanized Steel Coil Manufacturers and Suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Galvanized Steel eriri igwe > DX51D kpaliri Steel eriri igwe
DX51D kpaliri Steel eriri igwe Ndị nrụpụta
Qingdao Sino Witop Steel Co., LTD bụ ọkachamara emeputa nke DX51D galvanized steel coil na China. Witop Steel bụ onye na -eweta ihe na -eweta DX51D galvanized steel coil na ụwa. Witop steel nwere ahịrị mmepụta galvanized nwere ikike kwa afọ nke 100000 tọn, nke nwere ike rụpụta JIS G3302 na ọkọlọtọ ASTM A572. Site na akụrụngwa dị elu na teknụzụ na-eduga, Witop Steel na-emepụta DX51D galvanized coil steel & plate nwere ọkpụrụkpụ 0.12-0.8mm na obosara nke 1250mm ma ọ bụ obere. N'etiti DX51D galvanized steel coil, ndị ahịa si mba ofesi na-akwado ngwaahịa dị elu nke ike DX51D galvanized.
A kọwara DX51D galvanized steel coil dị ka nchara carbon kpuchie na zinc n'akụkụ ya abụọ. Ihe mkpuchi zinc bụ ụzọ kachasị dị irè na akụnụba nke ichebe igwe nchara nchara site na gburugburu na -emebi emebi. DX51D galvanized steel coils nwere mgbochi mgbochi nchara na mgbochi corrosion, yabụ ndụ ọrụ dị ogologo karịa nchara nkịtị. DX51D galvanized steel coil nwere ịdị arọ, ike dị elu, isi ike akpụkpọ dị mma, yana arụmọrụ seismic dị mma. DX51D galvanized steel coil bụ ihe na -agbanwe agbanwe ma dịkwa mfe ịwụnye, nke na -ebelata ibu ọrụ na nrụnye yana belata oge ihe owuwu ahụ. N'elu igwe mkpuchi DX51D galvanized mara mma na akwụkwọ akụkọ dị ike, siri ike ma na -agbanwe agbanwe na mma.
Igwe mkpuchi nchara galvanized DX51D dị mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ obodo, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ pụrụ iche, nnukwu ihe owuwu ụlọ na elu ụlọ, ihe ịchọ mma n'ime na mpụga. DX51D galvanized steel coil steel nwere njirimara nke ịdị arọ dị mfe, ike dị elu, ihe owuwu dị mfe na ngwa ngwa, iguzogide ala ọma jijiji, iguzogide ọkụ, iguzogide mmiri ozuzo, ndụ ogologo oge, yana enweghị mmezi.
S350GD Z200 DX51D Galvanized Steel Coil
Isi njirimara nke eriri igwe nchara galvanized nwere nguzogide corrosion siri ike, ịdị mma dị elu, nke bara uru maka nhazi ọzọ, nke akụ na ụba na nke bara uru. S350GD Z200 DX51D Galvanized Steel Coil na -ekpuchi Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa na ahịa South America.
0.18MM Oké DX51D Galvanized Steel Coil
Isi njirimara nke eriri igwe nchara galvanized nwere nguzogide corrosion siri ike, ịdị mma dị elu, nke bara uru maka nhazi ọzọ, nke akụ na ụba na nke bara uru. 0.18MM Okpu DX51D Galvanized Steel Coil na -ekpuchi Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa na ahịa South America.
Z80 DX51D Galvanized Steel eriri igwe
Isi njirimara nke eriri igwe nchara galvanized nwere nguzogide corrosion siri ike, ịdị mma dị elu, nke bara uru maka nhazi ọzọ, nke akụ na ụba na nke bara uru. Z80 DX51D Galvanized Steel Coil na -ekpuchi Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa na South America ahịa.
Enwere ike ịhazi DX51D kpaliri Steel eriri igwe emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama DX51D kpaliri Steel eriri igwe. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu DX51D kpaliri Steel eriri igwe. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!